३५ वर्षको उमेरपछि गर्भधारण गर्न कतिको जोखिमपूर्ण ?
काठमाण्डौँ - कुनै पनि महिलाको लागि गर्भधारण गर्ने सही समय हो २५ देखि ३५ वर्षको उमेर । कम जोखिममा गर्भधारण र सहज तरिकाले सुत्केरी गराउनका लागि महिलाहरुले समयमा नै विवाह र बच्चाको योजना बनाउनुपर्छ । तर पछिल्लो समयको व्यस्त जीवनशैली र बदलिँदो संस्कृतिका कारण महिलाहरु ढिला गरी विवाह गर्न चाहन्छन् । जसले गर्दा
काठमाडौं - नेपालमा अहिले पनि करिब १७ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखा मुनि रहेका छन् । त्यस्तै, अन्य धेरै मानिसहरु पनि सामान्य आर्थिक स्थितिमा रहेका छन् । शाहकारीहरुले आफ्नै तवरले दशैँतिहार मनाउने गर्दछन् । विशेषत मासु सेवन गर्नेले भने जस्तै अवस्थामा पनि मासुको जोहो गर्ने प्रयास गर्छन् । यद्यपि सबै नेपालीले
कोरोना अपडेट : आइतबार थप ३ सय ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं - नेपालमा आइतबार थप ३ सय ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको ८ हजार ८ पिसिआर परिक्षणका क्रममा २ सय ९१ जना र १ हजार ५ सय ९८ एन्टीजेन परिक्षणका क्रममा १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख १२ हजार ५३
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय १७ जनामा संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं – नेपालमा बिहीबार थप ३ सय १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको ९ हजार ६ सय ९ पिसिआर परिक्षणका क्रममा ३ सय १ जना र ३ हजार ३३ एन्टीजेन परिक्षणका क्रममा १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मनत्रालयले जनाउको छ । यो संगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख ११ हजार
मुत्र प्रणाली अन्तर्गत मिर्गौला, पिसाबनली र पिसाब थैलीको पत्थरीको समस्या लिएर पिसाब सम्बन्धी शल्यक्रिया विभागमा आउने बिरामीको संख्या उल्लेख्य छ । यस विभागमा आउने सय जना व्यक्तिमध्ये १५ जनालाई मुत्र प्रणाली सम्बन्धी पत्थरी हुने गरेको पाइएको छ। एक पटक पत्थरी भएका व्यक्तिमध्ये करिब ४० देखि ६० प्रतिशतमा
काठमाडौं । दशैंपछिको अर्को ठुलो चाड हो, तिहार । तिहार भन्नसाथ माला, बत्ती, फलफूल र टीकाको झिलिमिली अनि बास्नादार परिकारको झल्को आउँछ । त्यससँगै तिहार सेलका लागि पनि उत्तिकै प्रसिद्ध छ । तिहार र सेलरोटी एकअर्काको पर्याय जस्तै । जब तिहारको सम्झना हुन्छ, सेलरोटीको तलतल लाग्छ । जब सेलरोटी देख्छौं, तिहारको झल्को
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४६९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४६९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७,११५ पीसीआर परीक्षणमा ४२२ र ३,१७२ एन्टिजेन परीक्षणमा ४७ जना गरी ४६९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै
कसरी स’म्प’र्क गर्दा बच्चा बस्छ, बाँ’झोप’नाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब हेरौ
डा. सबिना सिम्खडाले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो । तीन बर्षमा हजारौं निःसन्तानको पीडा खेपेका महिलाहरुलाई आमा बन्न सहयोग गरेकी छन् । निःस’न्तान’पन भएर उपचारको लागी नेपाल बाहिर जानेहरुलाई नेपालमै उपचार संभव छ भनेर देखाएकी छन् । पछिल्लो समय निःसन्तानपन (बाँ’झोप’ना)को
नेपालमा आइतबार थपिए ५५७ जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं : नेपालमा आइतबार थप ५ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको ६ हजार ६१ पिसिआर परीक्षणका क्रममा ५ सय २२ जना र १ हजार ५ सय ६४ एन्टीजेन परीक्षणका क्रममा ३५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख ३ हजार ७१ पुगेको छ । त्यस्तै
काठमाडौं - हिजो भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खान छुटेका बालबालिकालाई आज पनि खुवाइँदै छ । ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए एकदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई आज पनि जुकाको औषधि खुवाउन पाइने छ। पालिकाले तोकेका खोप केन्द्रमा लगेर आफ्ना बालबालिकालाई भिटामिन ए जुकाको औषधि खुवाउन
कुल पोष्ट : 318